एक बर्षपछि बल्ल आर्यनको हातमा फिल्म ! - Glamorous Icon
११ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०३:४३
Home›GIcon News›एक बर्षपछि बल्ल आर्यनको हातमा फिल्म !
एक बर्षपछि बल्ल आर्यनको हातमा फिल्म !
गत बर्ष माघ २१ मा ‘क्लासिक’ फिल्म रिलिज पश्चात अभिनेता आर्यन सिग्देल पर्दामा आएका छैनन् । कुनै फिल्म नगरेर बरु विदेशका स्टेज कार्यक्रमतिर व्यस्त बनेका आर्यनको बारेमा फिल्म नपाएकोदेखि अरुको फिल्म नखेल्नेसम्मका अनेक गसिपहरु बने ।
अब भने आर्यन पर्दामा आउने पक्का जस्तै भएको छ । संभवत: ‘पुनर्जन्म’ निर्देशक सजन श्रेष्ठको ‘एक्सन कट’मा बन्न लागेको फिल्म ‘ईण्डलेस लभ’मा आर्यन लिड अभिनेता रहनेछन् ।
सजनको ‘पुनर्जन्म’मा पनि आर्यन लिड अभिनयमा थिए । सजनले आर्यन सहितको एक तश्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्, जहाँ आर्यनको हातमा ‘स्कृप्ट’ देख्न सकिन्छ ।
त्यसो त प्रेमकथामा बन्न लागेको उक्त फिल्मको एक गीतको लिरिकल भिडियो भ्यालेन्टाईनको छेकोमा रिलिज गरिसकिएको छ । श्रोतका अनुसार चैत्र महिनाबाट यो फिल्म फ्लोरमा जाने तयारी हुँदैछ । फिल्ममा अन्य कलाकार को रहने भन्ने खुलाईएको छैन् ।
रेखाको पलाँस गीत गाउनेलाई एक लाख उपहार ...
लुट २ बुकिङ खुल्यो, मल्टिप्लेक्समा आक्रामक
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ बन्ने, दोहोरिएला पूजा र पलको जोडी ?
किड क्विनले देखाए विविध प्रतिभा
धनगढीमा मिस फारवेष्ट प्रतियोगिता हुने
एक गार्डलाई आलिया भट्टको फोटो खिच्न महंगो साबित
कस्ले मार्ला बाजी ? ‘बाटो मुनीको फुल २’ र ‘हाउ फन्नी’को भिडन्त सुरु
`नाईं नभन्नु ल ४` लाई शुभकामना जीवनले दिए
शिल्पाले पारपाचुके माग्दा मध्यरातमा छविको खुला पत्र